2 siyaabaha aad ku ciyaari AVI la daaqadaha media player
2 siyaabaha aad ku ciyaari avi windows media player
AVI waa tan ugu muhiimsan oo gobolka ka mid ah qaab farshaxan ah si loo hubiyo in user helo aragtida wanaagsan ee sidoo kale audio file marka la soo ciyaaray oo ay tahay sabab ka mid ah in qaab waxaa loo tixgelinayaa inuu adduunka oo dhan, marka lagu kaydiyo iyo wadaagista warbaahinta sida ay iftiin size. Iyadoo la tixraacayo ciyaaryahan warbaahinta u tahay in la xuso in user waa in la hubiyo in tallaabooyinka lagama maarmaanka ah la qaado si loo hubiyo in faylka la ciyaaray sameeyo iyo tutorial tani waa dhan oo ku saabsan qaab AVI iyo sida ay la ciyaari karaa iyadoo la isticmaalayo daaqadaha media player.
Qeybta 1: windows media player ma ciyaari Maxaad karaa AVI?
Qeybta 2: Beddelaan AVI videos usingWondershare Video Converter Ultimate
Qeybta 3: Ku rakib codecs AVI cid saddexaad
Qeybta 4: Isbarbar Table
Waa in la ogaadaa in ay jiraan sababo badan oo aad u hubiso in qaab AVI aan la soo ciyaaray markii windows media player waxaa loo isticmaalaa oo tutorial this Hubi in ka dhigi doonaa in sababaha ugu badan ee aan ku qoran oo keliya, laakiin waxay sidoo kale la xalin adigoo isticmaalaya gobolka ee functionalities tahay si haddii uu jiro waqti soo socda ka dibna user Khasab ma aha in raadiso Casharrada internetka. Waa sabab la mid ah in saddex sababood ee ciyaaryahan warbaahinta files warbaahinta aan u ciyaaro ayaa ku qoran sida soo socota si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah aqoon tahay oo si deg deg xukumi kara arrinta si loo hubiyo in xalka waxaa laga codsadaa habka ugu fiican.
1. codec ma lagu rakibay
Marka user ayaa lagala soo bixi iyo rakibay codec ku habboon inuu u ciyaaro files AVI markaas arrinta dhacdaa inta badan iyo waxa ay sidoo kale la hubiyo in user waa xumaaday. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka pack codec farshaxanka waxaa lagu rakibay taas oo user waa la hubiyo in ka shaqeynayaan marnaba la kulmi doonaa arrimaha iyo barnaamijyada la xiriira in waxa loo xiraa arrintan la xiriira oo aan la reebay ka shaqeeya. Si aad u hesho inta badan ka soo fikradda ah waxaa lagula talinayaa in ay baadhaan, waayo, baakad codec online oo sidaas daraaddeed user sidoo kale hubin karaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee shaqada farshaxanka waxaa lagu sameeyaa arrintan la xiriira.
2. files kharribeen
Haddii fur-tago codec ku habboon oo lagu rakibay markaas sababta labaad ee ugu badan ee ciyaaryahan warbaahinta in aan ciyaaro files AVI waa xaqiiqda ah in user la isku dayayo in la isticmaalo file a in kharribmay. Barnaamijku waxa uu la kulmi doonaa oo keliya ma aha qalad, laakiin waxa ay sidoo kale lagu soo bandhigi lahaa si user si fiican wixii ku saabsan dhibaatada in la soo wajahay. In la xiriirta arrintan user waa in la hubiyo in ay Casharrada online ma akhriyaan oo kaliya sameeyo laakiin sidoo kale codsatay in la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka qaraarada tahay waxaa codsatay in arrintan la xiriira. Waxa kale oo hubin doona in user helo xalka ugu wanaagsan ay tahay in la codsatay in arrintan la xiriira.
3. Qaabka si fiican u badaley
By la isticmaalayo habab diinta ka liita u tahay in la xuso in user ma aha oo kaliya la kulmi doonaan arrinta, laakiin sidoo kale ka heli doontaa qalad ah in file AVI ma aha playable. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka diinta ka tahay waxaa laga codsadaa in ay hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in tutorial la akhriyey buuxa si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo.
Qeybta 2: Beddelaan AVI videos isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate
Waxaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka tahay in lagu dabakhi karaa si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in 150+ taageero qaab waxaa ku riyaaqay ee hab fiican inaad heshid isaga soo baxay arrinta. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka ay tahay in lagu dabaqo arrintan la xiriira si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo fasalka,
1. URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in version ugu danbeeyay barnaamijka ee la soo bixi, rakiban oo ay maamulaan,
2.Once waxaa la samayn user markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylasha lagu darin interface ugu weyn si aad u hesho socda:
3.Beerta user markaas u baahan yahay in ay doortaan qaab ku habboon ka khaanadda saxda ah ee barnaamijka si loo hubiyo in qaab windows media player ku taageeray la doorto:
4.The button diinta ka dibna waxaa in la riixi si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo nidaamka halkan ku dhamaato:
5.The user hadda awood u yeelan doonaan in ay hubiyaan in qaab AVI la muuqan ciyaaray:
Sidoo kale waa waxa ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijka fanka si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in geeddi-socodka waa in la raaco arrintan la xiriira ayaa la soo sheegnay sida soo socota:
1. user u baahan yahay in ay soo booqdaan URL http://filehippo.com/download_klite_codec_pack/ si loo hubiyo in uu ka arrinsashada bilowday:
2.Beerta download link waa ka dibna in la riixi inuu ku soo bilowdo dajinta ee barnaamijka iyo faylka la xiriira waa in la badbaadiyey:
User 3.Beerta markaas u baahan yahay in la hubiyo in file ka soo dejisan waxaa maamula iyo dardar la raacay arrintan la xiriira si loo soo dajiyo barnaamijka. Marka lagu sameeyey qeybtii labaad nidaamka waxaa loo baahan yahay:
Qaab ay taageerayaan
Wondershare Video Convertor Ultimate Mid aad u fudud All
K-Lite codec Pack Ma fududa Gaarka ah
The Wondershare Video Convertor Ultimate waa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo uqaabeeyaan waxaa lagu sharaxay sida hoos:
Wondershare Video Convertor Ultimate waa barnaamijka ugu fiican in uu leeyahay user saaxiibtinimo interface oo waa inuu xaqiijiyo in wixii kaloo lagu sameeyo qasabno oo kaliya dhowr iyo user marnaba leedahay si aad u hesho hababka adag si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo.
Qaabab ay taageerayaan
Wondershare Video Convertor Ultimate taageeraa in ka badan 150 qaabab taas oo muujinaysa xirfad ah oo uu soo dhafan halka barnaamijka la horumariyo. Waa barnaamijka ugu fiican si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in si sahlan oo toos ah oo qaynuunka waafaqsan.
3 talooyin ku saabsan tuuryo Windows Media Player
Xalin ma ciyaari karaa files m4a in Windows Media Player
> Resource > WMP > 2 siyaabaha aad ku ciyaari AVI la daaqadaha media player